ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောအိမ်တော် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-03 > စစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း
“ Notre Dame” ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုပါရီမြို့၌မီးရှို့ဖျက်ဆီးသည့်အခါပြင်သစ်သာမကဥရောပနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လည်းအလွန်စိတ်မသာညည်းတွားငိုကြွေးမြည်တမ်းခဲ့သည်။ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများကိုမီးတောက်များဖြင့်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း ၉၀၀ သမိုင်းကြောင်းမှသက်သေများကိုမီးခိုးနှင့်ပြာများဖြင့်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
တချို့ကဒီဟာကသန့်ရှင်းသောသီတင်းပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာငါတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်သတိပေးလက္ခဏာလား။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဥရောပ၌ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာနေရာများနှင့်“ ခရစ်ယာန်အမွေအနှစ်” တို့သည်တန်ဖိုးနည်းမှုနှင့်တန်ဖိုးနည်းမှုကြောင့်မကြာခဏနင်းချေခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ဘုရားသခင်၏တကယ့်အိမ်တော်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သုံးရက်ကြာပြီးမှသင်္ချိုင်းတွင်း၌အသစ်ပြုပြင်ကြ၏။ သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှခန္ဓာကိုယ်အသစ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ဘုရားသခင့်သားသမီးများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြောင်းရှင်ပေါလုရေးသားခဲ့သည်။ ပေတရုသည်သူ၏ပထမစာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ ၀ ိညာဉ်ရေးရာအိမ်ထဲ၌ကျောက်ခဲများအဖြစ်တည်ဆောက်သင့်ကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ။ သင်္ချိုင်းဂူတွင်မြှုပ်ထားသောအခါတပည့်တော်များအတွက်အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်စတင်ခဲ့သည်။ အခုဘာဖြစ်တာလဲ ငါတို့၏မျှော်လင့်ချက်သည်အချည်းနှီးဖြစ်သလော။ ယေရှုသည်မိမိ၏သေခြင်းအကြောင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်းသံသယများနှင့်စိတ်ပျက်စရာများပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ပြီးတော့အကြီးမားဆုံးသက်သာမှု - ယေရှုအသက်ရှင်လျက်ထမြောက်တော်မူပြီ။ ယေရှုသည်သံသယများထပ်မံပေါ်ပေါက်လာရန်ကိုယ်ခန္ဓာအသစ်၌အကြိမ်ကြိမ်ပြသခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းအကြောင်းသက်သေခံပြီးဘုရားသခင့် ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းကိုဟောပြောသောတပည့်များသည်မျက်မြင်သက်သေများဖြစ်လာကြသည်။ သခင်ယေရှု၏အလောင်းတော်သည်ယခုကမ္ဘာပေါ်၌ပုံစံအသစ်ဖြင့်ရှိနေသည်။
Gottes Geist formt einzelne Bausteine, die Gott beruft, für das neue geistliche Gotteshaus. Und dieses Haus wächst immer noch. Und so, wie Gott seinen Sohn liebt, so liebt er auch jeden einzelnen Stein. «Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: "Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden". Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er "der Stein, den die Bauleute verworfen haben; der ist zum Eckstein geworden» (1. ဓာတ်ဆီ 2,5-7) ။
သခင်ယေရှုသည်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့်သင်တို့ကိုနေ့တိုင်းအသစ်ပြုပြင်ပေးသောကြောင့်သင်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်အတွက်အသစ်သောအဆောက်အအုံထဲသို့ဝင်ရန်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်အဘယ်သို့ဖြစ်လာမည်ကိုအရိပ်အဖြစ်သာမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သို့သော်သခင်ယေရှုသည်ဘုန်းတော်ဖြင့်ကြွ လာ၍ ဘုရားသခင်၏အိမ်သစ်ကိုလောကနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသောအခါခရစ်တော်၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားလာသောအခါအဖြစ်မှန်၏ခမ်းနားထည်ဝါမှုကိုမကြာမီမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။